दीर्घरोगी र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई नियमित सेवा प्रवाह गर्न अस्पतालहरूसँग अनुरोध | Seto Patrika
काठमाडाैं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दीर्घरोगी र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई नियमित सेवा प्रवाह गर्न अस्पतालहरूसँग अनुरोध गरेको छ।
आज नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कुनै पनि किसिमको आकस्मिक सेवा अस्पतालले नकार्न नपाइने स्मरण गराउँदै विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्ने अस्पताललाई सेवा नियमित गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
“क्यान्सर, डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था, मुटुरोग, प्रसूतिसम्बन्धी र दमलगायतका जटिल रोगहरूमा अत्यावश्यक सेवा चाहिने हुन्छ। त्यस्ता अत्यावश्यक सेवा यसअघि दिइरहेका विशिष्टिकृत र अतिविशिष्टिकृत अस्पतालहरूलाई नियमित गर्न अनुरोध गर्दछौं”, डा. देवकोटाले भने।
यस्ता दीर्घरोगीहरूको उपचारमा सहजता ल्याउनेतर्फ काम गर्न स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको पनि प्रवक्ता देवकोटाले ध्यानाकर्षण गराए। उनले हालसम्म ३३ हजार ५६२ वटा नमूनाकाे कोभिड-१९ परीक्षण गरिसकिएको बताए। तीमध्ये २५ हजार १४८ वटा र्‍यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट र ८ हजार ४१४ वटा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको हो।
पछिल्लो २४ घण्टामा दुवै विधिबाट तीन हजार १९ वटा नमूना परीक्षण गरिएको देवकाेटाकाे भनाइ छ।
Prevमाटोको ढिस्कोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु
nextअस्तव्यस्त बन्यो कृषि क्षेत्र, के भन्छन् किसानका नेता? ‘बैंकबाट ऋण लिएर वस्तु उत्पादन गर्ने किसानका लागि आपतकालीन कोषबाट तत्काल निश्चित राहत दिनुपर्छ।’